माओवादीका मधेश इन्चार्ज भन्छन्– मधेशमा माओवादी निकै जटिल अवस्थामा छ « Sansar News
माओवादीका मधेश इन्चार्ज भन्छन्– मधेशमा माओवादी निकै जटिल अवस्थामा छ
८ जेष्ठ २०७९, आईतवार १६:५५
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरि साबिकको अनुपातमा नतिजा आउँदा मधेश प्रदेशमा भने माओवादी केन्द्र बढारिए जस्तो देखियो । माओवादी केन्द्र ०७४ को नतिजाभन्दा निकै कम ९ पालिकामा सिमित भयो । गठबन्धनका बाबजुत माओवादी किन साबिकका १२ पालिकामा पनि हार्‍यो ? संसार न्यूजले माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश इन्चार्ज गणेश शाहसँग मधेश प्रदेशको नतिजाबारे केही समीक्षा गर्ने प्रयास गरेको छ । नेता शाहसँग पछिल्लो चुनावी नतिजाबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईँ इन्चार्ज बनेर जानुभयो तर, मधेशमा माओवादी केन्द्र बढारिए जस्तो भयो ? कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?
हो, मधेशमा हाम्रो अपेक्षित नतिजा आएन । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य फ्याक्टरहरु छन् । म धेरै विषयको कारण आन्तरिक हुन्छ भन्ने पक्षमा छु, मधेशमा आएको नतिजाको सन्दर्भमा पनि मैंले आन्तरिक कारण धेरै देखेको छु । कुनै समय हाम्रा लागि एजेण्डा प्रिय थियो । जनतामा बाँडिएका एजेण्डा पुरा भएन, वितृष्णा जाग्यो । हामीले संघीयता भन्यौ, समावेशिता भन्यौ, पहिचान भन्यौ तर, प्रतिनिधित्व बनाउने विषय एजेण्डागत रुपमा सम्बोधन गर्न सकेनौ । मलाई लाग्छ, जसको नतिजा अहिलेको चुनावबाट देखिए हो ।
हामीले अन्तिम समयसम्म पनि अन्तरविरोधलाई हल गर्न सकेनौ । चुनावी अभियानमा लाग्नु पर्नेमा हामी आन्तरिक किचलोमै अलमलियौं । पार्टीभित्र सबैले बुझ्नुभएको छ, मधेशमा माओवादी केन्द्र निकै जटिल अवस्थामा छ । यो जटिल अवस्थाको समाधान मैले मात्रै गरेर हुँदैन ।
अर्कोतिर, मधेशमा न माओवादीले प्रदेश समिति बनाउन सक्यो नत पालिका स्तरका कमिटी । कमिटी नै नभएपछि निर्वाचन परिचालन अभियान स्वतः प्रभावित हुने भइहाल्यो । एकातिर कमिटी नहुनु र अर्कोतिर पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चुलिनुले पनि मधेशमा समस्या बढेको हो । हामीले अन्तिम समयसम्म पनि अन्तरविरोधलाई हल गर्न सकेनौ । चुनावी अभियानमा लाग्नु पर्नेमा हामी आन्तरिक किचलोमै अलमलियौं । अहिले मधेशमा प्रभु साह प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । बारगेनिङ्ग गर्ने, पद नपाए अर्को पार्टीमा गइहाल्ने । यो बीचमा केही मान्छेहरुले त्यसरी पार्टी छोड्ने अवस्था पनि बन्यो । जसले हामीलाई केही क्षति बनाएको छ ।
अहिले मधेशको चुनाव धेरै महँगो देखियो । चुनावमा निकै आर्थिक चलखेल भएको पाइयो । माओवादीले आर्थिक चलखेल नगर्दा पनि नतिजा आफ्नो अनुकुलमा नआएको देखिन्छ । मौन अवधिमा मधेशमा पैसाबाँड्नेदेखि मतदाता लोभ्याउने अनेकन कामहरु भए । माओवादीले त्यसलाई रोक्न उचित कदम चाल्नुपथ्र्यो तर, सकेन ।
तपाईँ आफैं स्वयम् इन्चार्ज भएर जानुभएको छ । तर, मधेशमा कमिटी निर्माण हुन सकेन । आन्तरिक विवाद समाधानमा कोशिस नै भएन भन्ने गुनासो छ । तपाईँ आफैंले कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
पहिलो चुनाव जितेको तर, अहिले हारेको हिसाबले मैंले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जे–जसरी मधेशमा माओवादी हा¥यो त्यो हिसाबले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै मैंले राजीनामा पनि गर्नुपथ्र्यो तर, मधेश कमिटीमा अहिले त्यो अवस्था छैन् । अहिले हाम्रो प्रदेश कमिटी नै गठन हुन नसकिरहेको कारण म जिम्मेवारीबाट बाहिरिन सकिन । पार्टीभित्र सबैले बुझ्नुभएको छ, मधेशमा माओवादी केन्द्र निकै जटिल अवस्थामा छ । यो जटिल अवस्थाको समाधान मैंले मात्रै गरेर हुँदैन ।
अहिले मधेशमा मुख्यतः गिरीराजमणि पोखरेल, मातृका यादव र तपाईँबीचको टकरावले समस्या आएको भन्ने छ । आमसभाहरुमा पनि ति कुरा प्रष्टै रुपमा प्रकट भए । खास विषय के हो ?
अहिले मधेशमा हिजोको माओवादी मात्रै छैन, जनमोर्चाबाट आएको नारायणकाजी पक्ष, माओवादीबाट बाहिरिएर पुनः माओवादीमा आवद्ध भएको मातृका पक्ष पनि छ । यसको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्षले मलाई दिनुभएको हो । तर, मधेशमा समन्वयन गर्ने विषय मेरो काबुभित्र रहेनछ । यसको समन्वय अध्यक्ष ज्यूले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ ।
समन्वय गर्ने कुरा, कम्प्रमाईज गरेर गर्ने हो । तर, मधेशमा त्यस्तो गर्न सहज छैन । अर्को कुरा, पार्टीभित्र स्वीकार गरेको छु, मैंले अहिलेकै अवस्थामा मधेश प्रदेशको समस्या सुल्झाउन सक्दिन । मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि त्यस्तो छैन । आन्तरिक परिस्थिति अनुकुल नहुँदा म मधेशको जिम्मेवारी लिने स्थितिमा पुगेको हुँ ।
पार्टीभित्र स्वीकार गरेको छु, मैंले अहिलेकै अवस्थामा मधेश प्रदेशको समस्या सुल्झाउन सक्दिन । मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि त्यस्तो छैन । आन्तरिक परिस्थिति अनुकुल नहुँदा म मधेशको जिम्मेवारी लिने स्थितिमा पुगेको हुँ ।
‘मधेशको अवस्था बेग्लै रैछ, मैले नेतृत्व गर्न सक्दो रहेनछु’ भनेर यहाँले स्वीकार गर्नुभयो । भनेपछि, के तपाईँ यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन चाहनुभएको हो ?
हो, मैंले नेतृत्वसँग पनि भनिसकेको छु, मधेशको जिम्मेवारी एउटा उपयुक्त पात्रलाई दिनुपर्छ । मैंले यसको नेतृत्व गर्न नसक्ने कुरा स्पष्ट पारिसकेको छु । अहिलेको विवाद मेरो कारणले हो भने भने पनि तत्कालै बाहिरिन चाहन्छु । म मधेशमा निमित्त पात्र मात्रै हो । मेरो स्वयम् अनुभव र विज्ञताले पनि यो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्दैन ।
अन्तिममा, तपाईँले जसरी हेर्नुभयो र बुझ्नुभयो, अहिलेको मधेशको विवाद कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? पार्टी नेतृत्वसँग तपाईँका सुझाब के रहन्छ ?
सबैभन्दा पहिला, मधेशमा पार्टी विधानअनुसारको संगठन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । पार्टी विधानअनुसार संगठनको सञ्चालनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले मधेश फेरिएको छ । गएको पाँच वर्षभित्र मधेशमा धेरै ठूलो परिवर्तन भएको छ । यो बदलिएको मधेशबारे माओवादीले तथ्यगत, वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धान गरेर व्यवस्थित र विशेष कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।
मधेशका जनताले कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा वा अरुमा भिन्नता देखिरहेका छैनन् । भिन्नता अहिले कसले कति पैसा ल्याउँछ, कति बाँड्छ भन्नेमा देखिएको छ । अहिलेको अवस्थामा मधेशको वास्तविक मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्णं छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टीभित्र कस्तो परिपाटी बसाल्ने, कस्तो संस्कारको विकास गर्ने, नेता तथा कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने, पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेमा हामीले अरुले भन्दा फरक ढंगले सोंच्नुपर्छ । हामीले पार्टीलाई सैद्धान्तिक र सांगठनिक शुद्धिकरण र सुद्धिढीकरण गर्न आवश्यक छ । यसले कसले गर्न सक्छ, नेतृत्वले यसबारे ठोस निर्णय लिनुपर्छ । पार्टीलाई विधानसम्मत लगेमा देखिएका विवादहरु स्वतः समाधान हुन्छन् ।
अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन् – कुनै राष्ट्रघात गरेको छैन,…
मेयर नागेश कोइराला भन्छन् – विराटनगरको ऐतिहासिक साख…
भरतपुरकी मेयर रेनुलाई प्रश्न : दोस्रो कार्यकालमा के–के…
बालेन भन्छन् – मलाई कांग्रेस–एमालेका वडाध्यक्षहरु नै लागेर…
सिपी मैनाली भन्छन् – एमसीसीमा प्रचण्डको दुई जिब्रे…
लोकनारायण सुवेदी भन्छन् – ‘नेकपा’ नाममा तानातान भयो,…